Home Wararka Baarlamanka Galmudug oo doortay xubnihii ugu horreeyey ee Aqalka Sare
Baarlamanka Galmudug oo doortay xubnihii ugu horreeyey ee Aqalka Sare
Baarlamanka Galmudug ayaa goordhow doortay labadii senator ee ugu horreeyey ee maamulkaas ku matalaya Aqalka Sare ee baarlamanka ee 11-aad ee Soomaaliya.
Kursiga Koowaad – Saciid Siyaad Shirwac ayaa helay 87 ka mid ah codadka xildhibaanada kadib markii musharaxii la tartamayey Maxamed Daahir Maxamed uu tanaasulay. Waxaa diiday laba xildhibaan, mana jirin cid ka aamustay, ayada oo 89 xildhibaan ay codeeyeen.
Kursigan uu ku guuleystay Saciid Siyaad ayaa waxaa hadda ku fadhiya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Aqalka Sare Abshir Bukhaari, waxaana leh beesha Saleebaan ee Habargidir.
Kursiga Labaad – Waxaa sidoo kale la doortay Senator Yuusuf Geelle Ugaas oo kursigan hadda ku fadhiya, wuxuuna helay 87 codad, ayada oo mid uu diiday midna uu ka aamusay. Waxaa tanaasulay Daahir Faarax Fiidow oo la tartamayey.
Kursigii Saddexaad oo la filayey inay ku tartamaan Senator Cabdi Axmed Dhuxulow (Dhegdheer) iyo Guutaale waxaa tanasulay musharaxii kale, iyadoo codkii kalsoonida ee loo qaaday ay ogolaadeen 86 xildhibaan, waxaana diiday 2, halka ay ka amuseen 2 kale.
Kursigii Afraad: Waxaa ku tartami lahaa Samsam Daahir Maxamuud iyo Farxiyo Maxamed Guure, waxaana tanasulay Farxiyo taasoo keentay in codka kalsoonida loo qaado Senator Samsam Daahir, waxaana ogolaatay 89 xildhibaan mana jirin cid ka aamustay ama diiday.
Kursigii Shanaad: Waxaa ku tartami lahaa C/xakiim Macalin Axmed iyo haweeneyda Ismahaan Cabdi Xuseen, laakiin markii ay sheegay inay ka hartay oo ay u tanaashushay, codkii loo qaadayna waxaa ogolaaday 86 cod, waxaa diiday hal xildhibaan, waxaan ka aamusay 2 xildhibaan.